Badheedhihii Wasiir Koore Ee Reer Boorama U Sacab-tumeen | #1Araweelo News Network
Badheedhihii Wasiir Koore Ee Reer Boorama U Sacab-tumeen
“Hadaad Maqasho Soomaaliya ayaa la doonayaa, waxaad famahtaa cidda la doonayo,….” Wasiir Saleebaan Cali Koore
Burco(ANN)- Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland, Saleebaan Cali Koore, ayaa hadalo dhaxal-gal ah ka jeediyay madal lagu xusayay munaasibadii 60-guurada ka soo wareegtay markii ay Somaliland xorriyaddeeda ka qaadatay Boqortooyada Midawday ee United Kingdom. 26 June 1960, taas oo lagu qabtay Magaalada Boorama ee Xarunta Gobolka Awdal.
Mudane, Saleebaan Cali Koore, wuxuu ka sheekeeyay taariikhda maalinta 26 Juun iyo marxaladihii ay soo martay, isagoo dhinaca kalena xusay heshiisyadii Boqortooyadii Midawday ee Britain la gashay Odayaashii xeebaha Somaliland iyo halgankii Daraawiishta ee uu hoggaaminayay halyeygii Seyid Maxamed Cabdulle Xasan.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland, Saleebaan Cali Koore, wuxuu khudbada dhaxal-galka ah ee uu ka jeediyay Magaalada Boorama kaga hadlay rabitaanka Soomaaliya iyo doorka dadka deegaamada darafyada, taas oo si farshaxan ah uu bulshada ugu hoga-tusaaleeyay, wuxuuna xusay in marka la leeyahay waxa la doonaya Soomaaliya aannay ujeedadu ahayn darafyada ee cidda la doonayaa ay tahay deegaamada dhexe.
Saleebaan Cali Koore, wuxuu xusay in magaalada Boorama taariikh weyn ku leedahay Somaliland iyo dhismaheeda oo ay tahay magaalada loo yimaado dalxiiska, halka dhinaca kalena ay tahay magaaladii aqoonta iyo waxbarashada, balse wuxuu xusay in dhowaan uu arkayay dhawaaqyo kasoo baxayay magaalada Boorama, kuwaas oo uu sheegay in aannay fahmin xaqiiqda, isla markaana wuxuu ku tilmaamay in ay ahaayeen dhawaaqyadaasi kuwo la siyaasadeeyay, haddii buu yidhi, aannay hoosta wax ka hulqayn.
Wasiirka, ayaa markii uu badheedhihisa ka jeediyay halkaa, waxay bulshadu ku qaabileen sacab iyo mashxarad, isagoo sheegay in aannu isagu ahayn qof runta ka gabada sidaa awgeed uu dadka Boorama runta u sheegayo.
Dooda dhaxal-galka ah ee Wasiir Saleebaan Cali Koore, ka jeediyay Boorama halkan ka daawo.